Vocational-Electrical Install Class- OTJ-Plumbing-Engineering Diploma-Corporate|AKI Myanmar Training Class – Application of Knowledge and Idea
“M&E (Building Services) Coordinator Courses with On-the-Job-Training (OJT)”သင်တန်း
Duration— 4months(Including On-the-Job-TrainingProgram : 3months)
Class Day— Saturday & Sunday
Time — (2 pm –7pm)
ခေတ်မှီလူနေမှုအဆောက်အဦးများ၊ Hotel ၊ Shopping Mallများတွင် M&E Servicesများ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ရန်နှင့် M&E (Building Services) လုပ်ငန်းခွင်များသို့ ၀င်ရောက်ရန်ပြင်ဆင်နေသူများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်၏လိုအပ်ချက်ကို အခြေခံ၍သင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဒီ Course ဟာ ဆိုရင်ဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်မှာတစ်ပတ်(၅)ရက်(OJT)၊ သင် တန်းကျောင်းမှာ တစ်ပတ်(၂)ရက်လေ့လာသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်းသင်တန်းကာလ(၄)လဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင် Course ထဲတွင်လည်း M&E နှင့်ပတ်သတ်သော AutoCAD Drawing ဆွဲနည်းများကို ဖြည့်စွက်သင်ကြားပေးပါသည်။
သင်တန်း၌ စာတွေ့လက်တွေ့သင်ကြားပေးသည့်အပြင် OJT (On-the-Job-Training) အပိုင်းပါ ပါ၀င်သောကြောင့် Internship ဆင်းရန်အတွက် ရှာဖွေနေသော Final Year ကျောင်းသားများအတွက်လည်း ပိုမိုအဆင်ပြေစေသောသင်တန်းဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် OJT (On- the- Job -Training) ကာလသည် Field Trip သွားရောက်၍ ရက်တိုလေ့လာသည်မျိုးမဟုတ်ပဲ လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အချိန်ပြည့်လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် ကုမ္ပဏီများနှင့်ချိတ်ဆက်ကာ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်များကို စာတွေ့လက်တွေ့သင်ကြားပေးသောကြောင့် M&E Service Technician များ၊ M&E Coordinator ဖြစ်လိုသူများအတွက် မဖြစ်မနေတက်ရောက်ထားသင့်သည့် သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။
သင်ကြားပေးမည့် Course Outline တွေကတော့—
Interpreting of Archi, Civil and M&E Drawing
Produce M&E Coordination Drawing Using Auto CAD
Fundamentals of M&E Systems(ACMV, Electrical, Fire Detection & Fire Fighting, Water Supply, Plumbing and Sanitary)
Process and Procedures of M&E works
Planning, Coordination, Monitoring and Reporting
Course Fees : 300,000 MMK
10 Early Birds – 10% Discount : 270,000 MMK
Class (A) : SATURDAY, SUNDAY (2:00 pm – 7:00 pm)
Class (B) : SATURDAY, SUNDAY (8:00 pm – 1:00 pm)
Class (A)—MONDAY & TUESDAY (3:00 pm to 5:00 pm)
(B) —MONDAY & TUESDAY (6:00 pm to 8:00 pm)
(C) —SATURDAY & SUNDAY (10:00 am to 12:00 am)
(D) —SATURDAY & SUNDAY (12:00 pm to 2:00 pm)
CAD Drafterပညာရပ်ဖြင့် အသက်မွေးကြောင်းပညာရပ်များအားလုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက်မဖြစ်မနေတက်ထားရမည့် Software သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Mechanical, Electrical,Civil, Archi Drawing များ 2D/3D, Assembly ပုံများကိုအခြေခံမှစတင်၍မည်သည့်အင်ဂျင်နီယာပုံများမဆိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာရေးဆွဲနိုင်သည်အထိသင်ကြားပေးပါသည်။
Address : No.23, C5 & D5, Hledan Road, (8) Quarter, Kamayut Tsp, Yangon, Myanmar.
Hotline Number : (+95) 09 788 102 034,
(+95) 09 505 4973
Training Center : (+95) 09 260 738 175,
(+95) 09 254 021 343
Trading : (+95) 09 443 199 605
Eng Services : (+95) 09 443 066 689
Training Center : engg.training@akimyanmar.com
Trading : sales@akimyanmar.com
Engg Services : engg.services@akimyanmar.com
© 2021 AKI Myanmar . Powered by Source Code.